ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ - Sorrento Therapeutics
ဇီဝနည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သိပ္ပံနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ 25+ နှစ်
ဒေါက်တာ Ji သည် Sorrento ကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2006 ခုနှစ်ကတည်းက ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး 2012 ခုနှစ်မှစတင်ကာ CEO နှင့် President အဖြစ် 2017 ခုနှစ်မှ ဥက္ကဌ၊
Sorrento တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Bioserv, Scilex Pharmaceuticals, Concortis Biotherapeutics, Levena Biopharma, LACEL, TNK Therapeutics, Virttu Biologics, Ark Animal Lymphary Systems နှင့် Sofusa Delivery အပါအဝင် အံ့မခန်းတိုးတက်မှုကို အင်ဂျင်နီယာချုပ်နှင့် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Sorrento ၏ Chief Scientific Officer အဖြစ် 2008 ခုနှစ်မှ 2012 ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ယာယီ CEO အဖြစ် 2011 မှ 2012 ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
Sorrento မတိုင်မီတွင် သူသည် CombiMatrix၊ Stratagene တွင် အကြီးတန်းအမှုဆောင်ရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Stratagene ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည့် Stratagene Genomics ကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
BS နှင့် Ph.D ။
Mr. Followwill သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
စျေးကွက်သုတေသနနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ကြီးထွားမှုဗျူဟာ အတိုင်ပင်ခံနှင့် လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ Frost & Sullivan မှ အကြီးတန်းပါတနာ၊ အသွင်ပြောင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးကုမ္ပဏီအဖြစ် 2016 ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မတိုင်မီက Frost & Sullivan တွင် ဥရောပ၊ အစ္စရေးနှင့် အာဖရိကရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ P&L ကို စီမံခန့်ခွဲသည့် ပါတနာတွင် အမှုဆောင်ကော်မတီမှ ပါတနာနှင့် မြောက်အမေရိကရှိ Healthcare and Life Sciences လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်သည့် ပါတနာ၊ အစပိုင်းတွင် စတင်ဝင်ရောက်ကတည်းက Frost & Sullivan သည် 1988 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အတိုင်ပင်ခံအလေ့အကျင့်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Mr. Followwill သည် နှစ် 30 ကျော် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အတိုင်ပင်ခံ အတွေ့အကြုံရှိပြီး အဓိက ဒေသအားလုံးနှင့် စက်မှုကဏ္ဍ အများအပြားတွင် ရာနှင့်ချီသော အတိုင်ပင်ခံ ပရောဂျက်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ပရောဂျက်တစ်ခုစီသည် တိုးတက်မှု၏ ဗျူဟာမြောက် အရေးပါမှုကို အာရုံစိုက်ထားသည်။
ဒေါက်တာ Janda သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်ကာ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Janda သည် 1996 ခုနှစ်ကတည်းက The Scripps Research Institute (“TSRI”) မှ ဓာတုဗေဒ၊ ခုခံအားနှင့် အဏုဇီဝသိပ္ပံဌာနများတွင် ပါမောက္ခ Ely R. Callaway ဂျူနီယာအဖြစ် သဘာပတိအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး Worm Institute of Research and Medicine ( TSRI တွင် 2005 ခုနှစ်မှစတင်၍ “WIRM”) ထို့အပြင် ဒေါက်တာ Janda သည် 1996 ခုနှစ်မှစ၍ TSRI တွင် Skaggs Institute of Chemical Biology တွင် Skaggs Scholar အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
သူသည် သက်တူရွယ်တူ သုံးသပ်ထားသော ဂျာနယ်များတွင် မူရင်း စာစောင်ပေါင်း 425 ကျော်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် CombiChem၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးစားမှု သိပ္ပံနှင့် AIPartia ဒေါက်တာ Janda သည် “Bioorganic & Medicinal Chemistry”၊ “PLoS ONE” ၏ တွဲဖက်အယ်ဒီတာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည် သို့မဟုတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ J. Comb အပါအဝင် ဂျာနယ်အများအပြား၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင်၊ Chem.၊ Chem. သုံးသပ်ချက်များ၊ J. Med. Chem၊ Botulinum ဂျာနယ်၊ Bioorg။ & Med ။ Chem Lett. နှင့် Bioorg ။ & Med ။ Chem
25 နှစ်ကျော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း ဒေါက်တာ Janda သည် ဟောပြောမှုများစွာကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ဓာတုနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများကို ပေါင်းစပ်သုတေသနပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းရန် ပထမဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါသည်။
ဒေါက်တာ Janda သည် Materia ၏ Scientific Advisory Boards နှင့် Singapore ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Mr. Lemus သည် 2017 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် သူသည် Ironshore Pharmaceuticals, Inc.
ထို့အပြင် သူသည် Silence Therapeutics (NASDAQ: SLN) နှင့် BioHealth Innovation, Inc. ၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ယခင်က Sigma Tau Pharmaceuticals, Inc. တွင် 2011-2015 ခုနှစ်မှ CEO အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Mr. Lemus သည် 1998-2011 မှ MorphoSys AG ၏ CEO နှင့် Executive VP အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ဇီဝနည်းပညာ IPO တွင် ကုမ္ပဏီအများပိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
MorphoSys AG တွင် သူတာဝန်မထမ်းဆောင်မီ၊ သူသည် Hoffman La Roche၊ Electrolux AB နှင့် Lindt & Spruengli AG (Group Treasurer) ကုမ္ပဏီများအပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများကို အသီးသီးရယူခဲ့သည်။
Mr. Shah သည် 2013 ခုနှစ်ကတည်းက ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင် 25+ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသူ
Mr. Shah သည် လက်ရှိတွင် Silex Holding နှင့် Scilex Pharmaceutical ၏ CEO နှင့် President အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။
Scilex မတိုင်မီ၊ သူသည် Semnur Pharmaceuticals (Scilex Pharmaceuticals မှဝယ်ယူ) ၏ CEO နှင့် ဥက္ကဌအဖြစ် 2013 ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
2011 ခုနှစ်မှ 2012 ခုနှစ်အထိ၊ Elevation Pharmaceuticals ၏ စီးပွားရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ငွေကြေး၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ဝယ်ယူမှုများနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
Elevation မတိုင်မီတွင် Mr. Shah သည် Zelos Therapeutics ၏ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး ငွေကြေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
Zelos မတိုင်မီ၊ မစ္စတာ Shah သည် CytRx တွင်အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌနှင့်စီးပွားရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ ယခင်က Mr. Shah သည် Facet Biotech နှင့် PDL BioPharma တွင် စီးပွားရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လိုင်စင်/မိတ်ဖက်များနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် အရောင်းအ၀ယ်များစွာကို ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
PDL မတိုင်မီ၊ Mr. Shah သည် BMS တွင် Global Marketing ၏ VP ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်းတွင် အထင်ရှားဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများထဲမှတစ်ခုပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုအတွက် "Presidents Award" ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
MA နှင့် MBA များ
ဒေါက်တာ Wu သည် 2016 ခုနှစ် သြဂုတ်လကတည်းက ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင်သူသည် 2019 ခုနှစ်မှစ၍ Silex Pharmaceutical ၏ BOD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဒေါက်တာ Wu သည် 2006 ခုနှစ်တွင် ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Crown Bioscience International ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ CEO၊ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် သိပ္ပံအရာရှိချုပ်၊
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ၊ သူသည် ကင်ဆာရောဂါနှင့် ကူးစက်ရောဂါများကို အာရုံစိုက်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘေဂျင်းမြို့ရှိ Starvax International Inc. ၏ စီးပွားရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
2001 မှ 2004 ခုနှစ်အထိ၊ သူသည် Asian Activities ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် Burrill & Company တွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
BS, MS, MBA, နှင့် Ph.D ။